‘Valentine's Day’ မှာ Single တွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ
Valentine’s Day’ မှာ Single တွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ
13 Feb 2018 . 10:55 AM
‘Valentine’s Day’ မှာ Single တွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတော့ ငှက်ပျောတုံးဖက်အိပ်ခိုင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ လျှောက်လည်စရာ အတွဲမရှိသေးတော့ ‘ချစ်သူများနေ့’ ဆိုတာကြီးကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာ ပြောပြချင်တာပါ။
‘Valentine’s Day’ က အင်္ဂါနေ့ဖြစ်နေတော့ ရုံးပိတ်မှာ မဟုတ်ဖူး။ ကိုယ်ဟာ ရုံးဝန်ထမ်း ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသား ဖြစ်နေရင်တော့ လုပ်နေကျအတိုင်း ရုံးပဲတက်လိုက်ပါ။ အတွဲရှိတဲ့သူတွေ ခွင့်ယူတိုင်း ကိုယ်လိုက်ယူစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်။
နေကြာစေ့လှော်စားပြီး ဇာတ်ကားထိုင်ကြည့်တာက ပိုအရသာရှိပါတယ်။ ‘Valentine’s Day’ မတိုင်ခင်မှာ ကိုယ်မကြည့်ရသေးတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးထား။ ပြီးရင် တစ်ယောက်တည်း ဇာတ်ကားထိုင်ကြည့်။ ရုပ်ရှင်ရုံကို သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေတာပဲ။ Deception (ဥပါယ်တံမျဉ်) နဲ့ Dimensions (မျက်နှာပြင်များ) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရုံတင်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံမှာပဲ အေးအေးလူလူ နေလိုက်စမ်းပါ။
‘Valentine’s Day’ ဆိုရင် စုံတွဲတွေက သူတို့ဘာသာ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ အင်တာနက်သုံးကြမှာ မဟုတ်ဖူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အင်တာနက်သုံးလိုက်။ လိုင်းပိုကောင်းတာပေါ့။ ကံကောင်းရင် ဟိုဒင်းဗီဒီယိုတွေတောင် ကြည့်ရဦးမယ်။ အဲဒီတော့ လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ အင်တာနက်ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။
(၄) ဘဝတူတွေနဲ့ လျှောက်လည်လိုက်။
လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း Single ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဖူး။ ကိုယ်လိုလူတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့သာ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ဘာမှကို အားငယ်စရာ မရှိတာ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲက ဘဝတူတွေနဲ့ လျှောက်လည်၊ မုန့်စားလိုက်။ ပိုက်ဆံလေး ဘာလေး ပိုနေရင် ပျော်ပျော်ပါးပါး သောက်လိုက်ပါဦး။
‘Valentine’s Day’ မှာ သူများတွေ အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း ကိုယ်က သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်။ Gym တွေ ဘာတွေသွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ မေ့ပြီးတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
ကဲ . . . . ဒါတွေကတော့ Single တွေ ‘ချစ်သူများနေ့’ ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ . . . အကြိုက်ချင်းတူရင် လက်မထောင်လိုက်ပါဦး။
Valentine’s Day’ မှာ Single တှေ ဘာလုပျသငျ့သလဲ
‘Valentine’s Day’ မှာ Single တှေ ဘာလုပျသငျ့သလဲဆိုတော့ ငှကျပြောတုံးဖကျအိပျခိုငျးတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့မှာ လြှောကျလညျစရာ အတှဲမရှိသေးတော့ ‘ခဈြသူမြားနေ့’ ဆိုတာကွီးကို ဘယျလိုအကြိုးရှိရှိ ဖွတျသနျးရမလဲဆိုတာ ပွောပွခငျြတာပါ။
‘Valentine’s Day’ က အင်ျဂါနဖွေ့ဈနတေော့ ရုံးပိတျမှာ မဟုတျဖူး။ ကိုယျဟာ ရုံးဝနျထမျး ဒါမှမဟုတျ ကြောငျးသား ဖွဈနရေငျတော့ လုပျနကေအြတိုငျး ရုံးပဲတကျလိုကျပါ။ အတှဲရှိတဲ့သူတှေ ခှငျ့ယူတိုငျး ကိုယျလိုကျယူစရာ အကွောငျးမရှိဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကိုယျ့အလုပျ ကိုယျလုပျ။
နကွောစလှေ့ျောစားပွီး ဇာတျကားထိုငျကွညျ့တာက ပိုအရသာရှိပါတယျ။ ‘Valentine’s Day’ မတိုငျခငျမှာ ကိုယျမကွညျ့ရသေးတဲ့ ဇာတျကားတှကေို ရှေးထား။ ပွီးရငျ တဈယောကျတညျး ဇာတျကားထိုငျကွညျ့။ ရုပျရှငျရုံကို သှားကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး အဆငျပွတောပဲ။ Deception (ဥပါယျတံမဉျြ) နဲ့ Dimensions (မကျြနှာပွငျမြား) ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ရုံတငျနတေယျ။ ရုပျရှငျရုံမှာပဲ အေးအေးလူလူ နလေိုကျစမျးပါ။
‘Valentine’s Day’ ဆိုရငျ စုံတှဲတှကေ သူတို့ဘာသာ အလုပျရှုပျနတေော့ အငျတာနကျသုံးကွမှာ မဟုတျဖူး။ အဲဒီတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို အငျတာနကျသုံးလိုကျ။ လိုငျးပိုကောငျးတာပေါ့။ ကံကောငျးရငျ ဟိုဒငျးဗီဒီယိုတှတေောငျ ကွညျ့ရဦးမယျ။ အဲဒီတော့ လိုငျးကောငျးကောငျးနဲ့ အငျတာနကျဖှငျ့ထားလိုကျပါ။
(၄) ဘဝတူတှနေဲ့ လြှောကျလညျလိုကျ။
လောကကွီးထဲမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျး Single ဖွဈနတော မဟုတျဖူး။ ကိုယျလိုလူတှေ အမြားကွီးရှိတယျလို့သာ သတျမှတျလိုကျရငျ ဘာမှကို အားငယျစရာ မရှိတာ။ အဲဒီတော့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးထဲက ဘဝတူတှနေဲ့ လြှောကျလညျ၊ မုနျ့စားလိုကျ။ ပိုကျဆံလေး ဘာလေး ပိုနရေငျ ပြျောပြျောပါးပါး သောကျလိုကျပါဦး။
‘Valentine’s Day’ မှာ သူမြားတှေ အလုပျရှုပျနတေုနျး ကိုယျက သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျ။ Gym တှေ ဘာတှသှေားပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျ။ စိတျညဈစရာတှေ မပွေီ့းတော့ အားလုံးအဆငျပွသှေားလိမျ့မယျ။
ကဲ . . . . ဒါတှကေတော့ Single တှေ ‘ခဈြသူမြားနေ့’ ကို ဘယျလိုဖွတျသနျးရမလဲဆိုတာကို ဖျောပွလိုကျရတာဖွဈပါတယျ။ ကဲ . . . အကွိုကျခငျြးတူရငျ လကျမထောငျလိုကျပါဦး။